Naphezu kokuthi ukwakhiwa kwezindlu zokuhlala ezikhululekile namuhla kuqhutshwa ngokuqinile, kuze kube manje isibalo esikhulu sabasebenzi kufanele sithinte endaweni encane. Futhi uma ukhetha ifenisha enhle yendlu yonke, ngokuyisisekelo, akuyona inzima kakhulu, ibhuku lokugezela elincane Ikamelo liyizinkinga eziningi. Ngokuqondile, hhayi yena, kodwa ukukhetha kwakhe.
Kuze kube yamuva, ukukhethwa kwezinto ezihlanzekile kulezi zinhlobo kwakungaphezu kokulinganiselwe, ngakho-ke kwakungeke kwenzeke ukuhlomisa ukugeza okunethezeka, okuhle nokusebenza kuKrushchev. Namuhla, isimo sesishintshile kakhulu, futhi ubukhulu obuhlukahlukene nobukhulu bemibhede yamakamelo amancane atholakalayo.
Kulokhu, ukunakwa okudingekayo kufanele kukhokhwe kulokho okuzokwenziwa kuyo. Kusukela ensimbi yensimbi nemikhiqizo yensimbi kungcono ukulahla. Yiqiniso, zihlala ziqinile futhi zihlala njalo, futhi zibiza kakhulu. Kodwa ngesikhathi esifanayo futhi esinzima ngokweqile, enamandla futhi enomsindo, futhi ngaphandle kwalokho, njengoba umthetho, unombala omhlophe ojwayelekile.
Kungcono uma ibhuku lokugezela elincane lenziwe nge-acrylic. Ukufakelwa kwamapayipi okwenziwe ngalezi zinto akuyona nje ukukhanya, kodwa futhi kuhluke ngendlela ehlukile. Ngakho, ukutholakala kwalo kuzokuvumela ukuthi uguqule indlu yokugezela yakho encane ibe umsebenzi wangempela wobuciko. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi bemikhiqizo enjalo bavame ukhiqiza zonke izimbiza eziyinkimbinkimbi, okuqeda isidingo sokuthenga imikhiqizo ehlukahlukene.
Ungakhohlwa nokuthi namuhla ukudayiswa kufaka amapulangwe amaningi asebenzayo angaba namashalofu angeziwe afihlekile ekuhloleni amehlo noma kumakhikhidi aphethwe ngamatshe. Ukugezela okufana nendawo yokugezela encane ngempela kuyi-godsend kuphela. Emakhakheni akhiwe ngaphakathi ungangezela noma yini, futhi igumbi lizobukeka lihle, futhi inkinga yokwamukela izinqubo zamanzi izoxazululwa.
Ukuze ubonwe ngeso lengqondo, kungcono ukuthi ibhuku lokugezela elincane linemibala elula: i-turquoise, emhlophe, iluhlaza okwesibhakabhaka nokunye. Ngaphezu kwalokho, imibala enjalo ingakhulisi nje indawo, kodwa futhi iphakamisa isimo. Uma ungafuni ukufaka amapayipi ajwayelekile ekhoneni, kungcono ukuthenga i-oval noma isikwele esincane. Amanzi okubhalela amafomu anjalo akugcini nje ukuthatha isikhala esikhulu, kodwa futhi abukeka ehambisana kakhulu.
Kuze kube yamuva, izindlu zokugeza ezidume kakhulu zamakamelo amancane kwakuyikhoneni. Namuhla, abakhiqizi badayisa amabhodlela azungezile, ama-oval nes square of size amancane nemibala ehlukene. Ngenxa yalokhu, ngisho nendawo yokugezela enezindawo ezincane kakhulu angaphenduki nje kuphela ekamelweni lokusebenza, kodwa ibe yinto yangempela yobuciko.
Ngisho negumbi elincane lokugezela angeke lihle kuphela, kodwa liphinde lilungele ukusetshenziswa kwansuku zonke. Into esemqoka akungayinaki iseluleko sezobuchwepheshe, kodwa ukulandela, futhi ukuhambela ngendlela efanele hhayi kuphela ukukhetha izinto ezihlanzekile, kodwa futhi nokwakhiwa jikelele kwaleli gumbi. Futhi okugeza okuncane kuKhrushchev, isithombe osibona lapha, yisibonelo esicacile sezinto ezingenhla.
Indlela wathumba? A ezihlukahlukene ungachithi of abantu bobudala obungefani abanezifiso ezahlukene
Drops "Nazivin" izingane: yokusetshenziswa